Umqeqeshi udumele kuhoxa imidlalo
UMQEQESHI weBafana Bafana uMolefi Ntseki uthi kumphathe kabi ukumiswa komdlalo obekufanele udlalwe yiqembu lesizwe ngoMgqibelo
LUNGILE MAJOKA | September 9, 2019
USALE ephoxekile umqeqeshi weBafana Bafana, uMolefi Ntseki, ngokuhoxa kwemidlalo yabo yobungani ngenxa yodlame olubhekiswe kwabokufika olubhebhethekile eNingizimu Afrika ngesonto eledlule.
IBafana bekumele idlale neZambia ngempelasonto kodwa labo makhelwane bawuhoxisa umdlalo kubekwa isizathu sokuthi ngeke kuqinisekiswe ukuphepha kweBafana uma isifika eZambia njengoba kuleli kuhlaselwa abokufika.
Iziphathimandla kwiSouth African Football Association (Safa) zibe sezicela iMadagascar kodwa nayo yagcina ihoxile ngemizuzu yokugcina. Kuphoqeke ukuthi iSafa ibakhulule abadlali babuyele emaqenjini abo.
“Okwenzeka ezweni lethu akulisizi ibhola kwazise njengeqembu besikubheke ngabomvu ukuba nomdlalo wokuqala nomqeqeshi omusha sibhekene nabadlali abasha ababiziwe. Ngebhadi manje abanye abadlali sebezobuyela emuva bengazange badlale,” kusho uNtseki.
UNtseki obekhuluma nabezindaba ngesikhathi kunesithangami nabezindaba ebesibizwe ngabaqeqeshi bakuleli bekhuza lolu dlame, uthe wethemba ukuthi luzophela udlame ukuze bakwazi ukuhlelela ngendlela imidlalo ezayo yokuhlunga.
NgoNovemba iBafana izoqala imidlalo emqoka yokuhlungela i-Africa Cup of Nations ka-2021. Iseqoqweni elilodwa neGhana, Sudan nozowina phakathi kweMauritania neSao Tome and Princip.
Amaqembu amabili azoqeda phezulu yiwona azoya eCameroon ngo-2021. Imidlalo yobungani ekhanseliwe bekuzoba eyokuqala kaNtseki omusha esikhundleni sokupheka iBafana njengoba engene endaweni kaStuart Baxter osule kubuywa kwi-Afcon ebingoJuni e-Egypt. IBafana izodlala neGhana ngoNovemba 11 ekuhambeni kanti izinsuku ezilandelayo zeFifa zokudlala eyobungani zizokuba ngo-October.
“Ngokokuhlela umdlalo lokhu kusibuyesela emuva ngoba ukube besibe nawo umdlalo wobungani bese siba nomunye ngo-Okthoba ngaphambi kokudlala neGhana neSudan besizoba nethuba elihle lokuhlelela umdlalo. Ngebhadi konke okwenzekile bekungekho ezandleni zethu. Ngiyakholwa wukuthi okwenzikile kuzodlula sikwazi ukuba nemidlalo yobungani kwikhalenda elilandelayo. Angiboni lesi simo siqhubeka isikhathi eside ngoba siyiNingizimu Afrika, singabantu boxolo,” kusho uNtseki.